Archive du 27-mai-2022
Mbola Rajaonah Fonja no fonenany raha mbola Mapar ny fitondrana
Nanomboka ny 24 may lasa teo no notsaraina teny amin’ny Fitsarana momba ny ady amin’ny kolikoly na ny PAC (Pôle Anti-Corruption) eny 67 ha ny mpandraharaha ara-toekarena Mbola Rajaonah.
Basin’ariary fito ?
Tsy misy angamba olona iray mirotsaka kandida hitondra firenena, dia tena handeha hamotika sy hanala baraka ny tenany no ao an-tsainy, fa mba hametraka zavatra tsara sy hampandroso ny vahoaka.
Antananarivo Volena fitohanana mba hanaiky teleferika ?
Tandra vadin-koditra amin’ny fiainana eto Antananarivo Renivohitr’i Gasikara ny fitohanan’ny fiara. Fatiantoka tsy roa aman-tany amin’ny lafiny toekarena anefa no aterak’io.
MCB Madagascar feno 30 taona “Tanjona lovain-jafy, miara-mivoatra amin’ny mpanjifa”
Feno 30 taona tamin’ity taona ity ny nijoroan’ny Banky MCB Madagascar, izay rantsan’ny MCB (Maritius Commercial Bank) manana ny foibeny atsy amin’ny Nosy Maorisy.
Fanongotana mason-jaza 7 lahy no nampidirina am-ponja any Toliara
Tsy misy atahorana intsony ny ain’i Gaston kely ilay zazalahy nisy nanala tany amin’ny distrikan’i Manja ny voamasony ilany andro vitsy lasa izay.
Madagasikara Miadana ny fiaingana amin’ny fizahantany
Andry Rajoelina Lasa any Dubai
Nikopak’elatra lasa nankany Dubaï ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, ary efa any an-toerana hiatrika ny fanokafana ny « Forum Seamless 2022 sur l’économie numérique ».
Resaka trondro maty Manahy ny teti-dratsy efa voaomana ny QMM
Mbola mafana ny toe-draharaha mahakasika ny raharaha "QMM" any amin'ny faritra Taolagnaro amin'izao fotoana. Niparitaka tamin’ny haino aman-jery sasany sy ny tambazotran-tserasera tato ho ato ny filazana fa tena nisy singa
Kaominina Ampitatafika Hozaraina fitaovana ireo ankizy sahirana hanao CEPE
Hozaraina fitaovam-pianarana na kits scolaire hiatrehany ny fanadinam-panjakana CEPE avokoa ireo ankizy sahirana ao anatin’ireo Fokontany 13 isa mandrafitra ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
CNARP Hanamafy ny fikarohana ara-pahasalamana
Nosokafana tamin’ny alalan’ny lanonana goavana ny 24 mey teo ny faha-45 taonan’ny CNARP (Centre National d’Application de Recherche Pharmaceutique) ivon-toeram-pikarohana momba ny fahasalamana,
Fasan’ny Karana Nitombo 25 % ireo taxi brousse mivoaka
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoana mahamaro ireo olona mivezivezy na haute saison isika amin’izao fotoana izao.
Ady amin’ny coronavirus 1 290 854 ny Malagasy nahavita vaksiny
Nanomboka tamin’ny nidiran’ny vaksiny hatramin’ny 15 mey 2022 teo, miisa 1 290 584 manome 4,54% amin’ny Malagasy no vita vaksiny feno mba hiarovana amin’ny coronavirus,
Fametrahana fandriampahalemana Feno 9 taona ny HWPL
Feno 9 taona ny 25 may 2022 teo ny HWPL na ny rafitra iraisampirenena miompana amin’ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin’izao tontolo izao.
Oniversite Miala nenina ny SECES
Nisy ny fihaonana teo amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sy ireo solontenan’ny SECES manerana ny nosy raha ny tatitra nataon’ny SECES tetsy Ankatso ny alarobia teo ho
Fahasalamana Votsa ara-tsaina ny 3% n’ny Malagasy
Ny 3%-n’ny mponina manerana ny Nosy no fantatra fa tratry ny havotsana ara-tsaina. Amin’ny ankapobeny dia mbola zaza izy ireny dia efa hita amin’ny alalan’ny fihetsiny, toe-batana izay hahafahana mianatra sy manovo fahalalana
Fikasana hangalatra Saika matin'ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy
Lehilahy iray manodidina ny 30 taona no saika matin'ny fitsaram-bahoaka tany Sambava raha tsy tonga haingana ny mpitandro ny filaminana.
Nentin’ny mpanampy nitsoaka Hita teny Soavimasoandro ilay zaza
Raharaha be vao hita ilay zazakely nentina mpanampy vavy nitsoaka nanomboka ny alarobia hariva lasa teo. Noho ny hamaroan’ny fifampizarana teo amin’ny facebook sy ny fanapariahana ny sarin’ilay mpanampy sy ilay zaza anefa
Fetin’ny reny Hikarakara hetsika ny IKM
Ho fanohanana hatrany ny vita Malagasy, ny IKM Antsahavola dia mikarakara hetsika mitondra ny lohanteny hoe “Neny Tiako Fifaliako”, andiany faha 8,
TENY GASY Miasa jamba rafozana ny Ben’ny Tanàna
Miasa jamba rafozana ny Ben’ny Tanàna. Tsy ny Ben’ny Tanàn’Antananarivo ihany, fa izy anefa moa no talaky maso indrindra. Satria eto amin’ny Renivohitra dia eo ambany mason’izao tontolo izao.
Tetikasa FIAVOTA Tokantrano 67 440 no nahazo tombotsoa tany Atsimo
Faritra roa isan’ireo miaina ny voka-dratsin’ny haintany, ny fiovan’ny toetrandro, kere,…ny ao Anosy sy Androy.
VOAMAMI Sehatra findramam-bola irosoana amin’ny fihariana
Ankoatra ny fampianarana sy tohana ara-bola dia isany tena mampiavaka sy ahafantarana ny tetikasa tanterahin’ny « Fonds d’intervention pour le developpement » ny vondrona VOAMAMI, izay ahafahan’ireo mpikambana manao tahiry avy amin’ny vatsy ara-bola na koa mindrana vola entina